Isetyhula yabona umatshini wokusika - Shangrui Machinery Co., Ltd.
Isetyhula yabona umatshini wokusika
Ukho kwindawo efanelekileyo Isetyhula yabona umatshini wokusika.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana Shangrui Machinery Co., Ltd..siqinisekisa ukuba ilapha Shangrui Machinery Co., Ltd..
Ngesiseko sabathengi abazinzileyo, imveliso ayiyifihlwa yintengiso..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu Isetyhula yabona umatshini wokusika.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
I-Heilizde 650t ishushu yometshini wometshini
Kutyelelo lwesibini kwisityalo, jikelele kunye neengcali zeTao Gao zagqiba uxinzelelo lwe-650t Preving, owona maqondo amanekala aphezulu okucinezela unokufikelela kwiidigri eziyi-180. Umnumzana Tao ubenomdla kakhulu ngomatshini wethu ukusukela oko wazama ukuzama ama-400t kumzi-mveliso wethu wokugqibela. Kodwa ngenxa yokuqhambuka, akazange afumane ithuba lokuxoxa ngeenkcukacha zoomatshini. Emva kolu tyelelo, samkela ngokufudumeleyo kwaye simbonisa iinxalenye zomatshini kunye noomatshini beveliswa kumzi-mveliso. Kwicandelo ngalinye kwipleyiti yentsimbi, ixabiso liphawulwe ngokucacileyo kwaye umboniso womzimba ubonelelwe. Amachweba ahamba naye imini yonke ukuba axubushe naye, kwaye wasinika olona khetho luxabisekileyo. Nditsho nomnxibelelanisi ohambelana nombala, ukuthutha, ufakelo kunye nokulayisha kwakhona kuncedisiwe ukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo.
Isatifikethi somatshini weShangrui
Zonke iintlobo zephaneli kunye ne-rand eqinileyo yefenitshala
Ukuveliswa kobugcisa bephaneli yepaneli kunye nezixhobo eziqinileyo zefenitshala, ngokweemfuno ezahlukeneyo zoyilo lwabathengi kunye nokuveliswa koomatshini abangekho mgangathweni
I-Shangrui Matshini Album
Ezinikezelwe ekunikezeleni abasebenzisi ngetekhnoloji ye-ermaisite kunye nenkonzo esemgangathweni.